राधा दुलाल कार्की आइतवार, कात्तिक १९, २०७४ 1178 पटक पढिएको
कमल ! स्कुल जाऔं’, दीपकले भन्यो ।
कमलले उँधो मुन्टो पारेर ‘नजाने’ भन्दै टाउको हल्लायो । दीपक पनि केही नबोली स्कुलतिर लाग्यो । दीपकले बाटाभरि सोच्यो, ‘कमल सधैं पढ्नमा प्रथम हुन्थ्यो । नाम लेखाउने पैसा नभएर होला स्कुल नजाने भनेको ।’
दीपकले आफूसँग भएको पैसा तिरेर स्कुलमा कमलको नाम लेखाइदियो । त्यो पैसा उसले आफ्नो खुत्रुके फुटाएर ल्याएको थियो ।
दीपकले गएर त्यो खुसीको खबर कमललाई सुनायो । कमलले भन्यो, ‘तिम्रो पैसा किन खर्च गरेको ? ’
दीपकले भन्यो, ‘तिमी स्कुलमा नहँदा मलाई ज्यादै नरमाइलो लाग्यो त्यसैले । तिमीलाई खुसी लागेन पढ्न पाएर ? ’
‘खुसी त छु, तर खाना नखाएकै दुई दिन भइसक्यो । भोको पेटले पढ्न सकिँदो रहेनछ । म त ठूलो भएर खेत जोत्छु, बाली लगाउँछु अनि पेटभरि खान्छु । आमा र बहिनीलाई पनि खान दिन्छु’, कमलले भन्यो ।
दीपकले भन्यो, ‘गुरुआमाले तिमीलार्ई पढ्न लिएर आउनु भन्नुभएको छ नि त !’
‘अहँ, म त आमासँग मेला जान्छु ।’
दीपकले भन्यो, ‘त्यसो भए म स्कुलमा पढेर आउँछु, अनि बेलुका तिमीलाई पनि सिकाउँछु । हुन्छ ? ’
‘हुन्छ–हुन्छ’, कमलले खुसी हँदै भन्यो ।
त्यसपछि कमल दिनभरि काम गरेपछि बेलुका दीपककहाँ पढ्न जान थाल्यो । दीपकले पनि कक्षामा पढाएका सबै कुरा कमललाई सिकाउँथ्यो । त्यसो गर्दा दीपकलाई पनि पढाइमा सहयोग पुगेको थियो । कमल स्कुल नगए पनि पुस्तक पढेर प्रश्नको उत्तर सजिलैसँग दिन सक्ने भयो । दीपक कक्षा उत्तीर्ण हुँदै थियो । कमलले पनि दीपकका पुस्तक पढ्दै गयो ।
एक दिन गाउँका माहिला बाले कमलको घरमा आएर भने, ‘कान्छी ! म काठमाडौं जाने भएको छु, कमललाई साथी पठाइदेऊ न है !’
कमलकी आमाले माहिला बालाई भनिन्, ‘यति सानो फुच्चे के साथी हुन्छ र माहिलाबा !”
माहिला बाले कमलकी आमालाई भने, ‘मेरो बोल्ने साथी हुन्छ । सहर पनि हेरेर आउँछ ।’
कमलकी आमाले भनिन्, ‘ए कमल ! जान्छस् त माहिला बासँग सहर ? ’
कमलले भन्यो, ‘तपाईंले जा भने जान्छु ।’
‘माहिला बाका छोरा काठमाडौंमा बसेर पढेका, उता पनि ठूलो घर बनाएका छन् अरे ! राम्ररी गएस् नि !’
कमलकी आमाले गहभरि आँसु पार्दै छोरालाई काठमाडौं जान बिदा गरिन् ।
कमल माहिला बाको पछि लाग्यो । दुई दिनको यात्रापछि कमल र माहिला बा गाडीबाट उत्रिए । माहिला बा ट्याक्सी लिएर काठमाडौंको कपन पुगे तर छोराको घर पत्ता लगाउन सकेनन् । केही वर्षपहिले त पातलो बस्ती थियो । तर आजभोलि त घरैघर । कुन हो कुन छोराको घर, ठम्याउनै नसकिने । उनले धेरै जनालाई सोद्धा पनि बलबहादुर थापालाई चिन्नेहरू फेला पार्न सकेनन् । माहिला बा दिक्क भएर पसलको पेटीमा थ्याच्च बसे ।
‘ला, दाजुको घरको पत्तो लागेन । अब हामी कहाँ जाने माहिला बा ? ’, कमलले सोध्यो ।
‘पहिले त यतैतिर जस्तो लाग्थ्यो । फोन नम्बर भएको भए बलबहादुरलाई बोलाउन हुन्थ्यो । घरमै नम्बर छुटेर दुःख पाउने भइयो कमल !’, माहिला बाले भने ।
कमल घरको भित्तामा लेखिएका नामहरू नियाल्दै निकै पर पुग्यो । एउटा घरको ढोकामा ‘मिस्टर बलबहादुर थापा’ लेखिएको रहेछ । खुसी हुँदै आएर कमलले भन्यो, ‘माहिला बा ! त्यहाँ मिस्टर बलबहादुर थापा लेखेकोे रहेछ ।’
दुवैजना त्यही घरको मूल ढोकामा पुगे ।
‘घरमा को छ हँ ? ’, माहिला बाले ढोका ढकढक्याउँदै भने ।
भित्रबाट आवाज आयो, ‘कसलाई खोज्नुभएको हो ? ’
‘बलबहादुर थापालाई !’
‘ए, गाउँबाट बुबा आउनुभएछ ’, बलबहादुरले माहिला बालाई ढोग गरे ।
माहिला बाले भने, ‘कति बिघ्न घरहरू बनेछन् । घर खोज्दा–खोज्दा पत्ता नलागेर म त झन्डै फर्केकोे । कमलले तेरो घर पत्ता लगायो र पो !’
‘को कमल बुबा ? ’
‘यो तल्लाघरे कान्छाको छोरो हो । सेना र माओवादीको झडप हुँदा कान्छो मेलामा काम गर्दै थियो । गोली हानाहानमा गोली उछिट्टिएर कान्छाको कञ्चटमा लाग्यो र उसको निधन भयो । यो उसैको छोरो हो, कमल । यसकी बहिनी पनि छे । आमाले मेलापात गरेर हुर्काउँदैछे । केटो निकै चलाख रहेछ । यसलाई नल्याएको भए त घर पत्ता लगाउनै मुस्किल पर्ने रहेछ मलाई ।’
बलबहादुरले सोधे, ‘कसरी पत्ता लगायो कमलले ? ’
‘तेरो गेटमा नाम लेखेको रहेछ, त्यही हेरेर ।’
‘कतिमा पढ्छौं कमल ? ’
‘दुई कक्षा पढेर छाडेको । अहिले स्कुल गएको छैन ।’
‘अंग्रेजीमा लेखिएको नाम कसरी थाहा पायौ त ? ’
‘मैले दीपकको किताब पढेर जानेको हुँ ।’
माहिला बाले भने, ‘यो गाउँकै इमानदार र विश्वासिलो केटो हो, त्यसैले त साथी ल्याएको !’
‘बुबा ! मलाई पनि यस्तै इमानदार मान्छेकोे आवश्यकता छ । यसलाई यतै राखेर काम सिकाउँछु, हुन्छ ? ’
‘खै, मैले चार दिनका लागि लिएर जाऊँ है भन्दा त यसकी आमाले गहभरि आँसु पारेकी थिई । उसैलाई सोध्’, माहिला बाले भने ।
‘कमल ! तिमी मसँगै बस । बिहान–बेलुका पढ । दिउँसो मेरो अफिसमा काम गर । बेलाबेलामा घर पनि जाउला । हुँदैन त ? ’
कमलले मुन्टो हल्लायो ।
उसले मनमनै दीपकलाई भन्यो, ‘तिमीलाई धन्यवाद ! अब म मन लगाएर पढ्छु । बहिनीलाई पनि पढाउँछु । आमाको हेरविचार पनि गर्छु ।’
आइतवार, चैत ४, २०७४ भट्टाका कुल्लीहरू
आइतवार, चैत ४, २०७४ नानीबाबुसँग मनका कुरा : आईटी प्रयोग गरे भविष्य राम्रो हुन्छ
आइतवार, चैत ४, २०७४ संग्रहालयमा रमाउँदै विद्यार्थी
आइतवार, फागुन २७, २०७४ नानीबाबुसँग गीता केशरीका मनका कुरा
आइतवार, फागुन २७, २०७४ विदेशी परिकार पकाउँदै नेपाली विद्यार्थी
मंगलवार, फागुन २२, २०७४ नेपाली खाना सन्तुलित खाना
आइतवार, फागुन २०, २०७४ कथा टुथपेस्टको
५० वर्षसम्म बनेन चिसापानी-मंगलसेन द्रुतमार्ग 1409
'गलत गर्ने अभिलाषा भए दण्ड भोग्न तयार हुनु' 868
मोटरसाइकल चोरी गर्ने समूह पक्राउ 8
खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाही गरिने : मन्त्री पण्डित 105
तीन अर्ब ६० करोडको संरचना २४ महिनामै ठडियो 7299
'खटाइएको ठाउँमा नजाने कर्मचारी बर्खास्त' 1086
नक्कली प्रहरीको भेषमा ठगी गर्ने महिला पक्राउ 313
प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्: अब चिल्ला सडक बनुन्, खेतमा धानका बाला झुलुन् 1484